Oovimba beBTC- Iphepha 2 lama-28
I-Bitcoin Iyakhubeka njengoko i-SEC ihlehlisa i-Bitwise kunye ne-Grayscale Applications Isigqibo kuNyaka ozayo
Ukuhlaziywa: 19 Disemba 2021
As Bitcoin (BTC) kunzima ukugcina iibhere, i-United States Securities and Exchange Commission (SEC) ibhengeze ukuhlehliswa kwesigqibo sayo kwi-Bitwise Bitcoin ETP Trust kunye nezicelo zeGrayscale Bitcoin Trust.
Ugunyaziwe olawulayo ukhupha imihla emibini eyahlukeneyo yokwandiswa kwezicelo zokugqiba ukuba zivume, zaliwe, okanye "ukuqalisa iinkqubo zokuqinisekisa ukuba uyala" izicelo. I-SEC iphawule kwimemo yayo ethunyelwe kuzo zombini iifemu ukuba:
"IKomishoni ifumanise ukuba kufanelekile ukumisela ixesha elide lokuthatha inyathelo malunga notshintsho lomgaqo ocetywayo ukuze ibe nexesha elaneleyo lokuqwalasela utshintsho olucetywayo lomgaqo kunye nezimvo ezifunyenweyo."
Oko kwathiwa, abahlalutyi balindele ukuba umlindi enze isigqibo malunga neBitwise Bitcoin ETP Trust Grayscale Bitcoin Trust ngoFebruwari 1 kunye noFebruwari 6, 2022, ngokulandelanayo.
Ekuqaleni kuka-Oktobha, i-Bitwise Asset Management yathumela isicelo kwi-NYSE Arca ye-BTC ETF. Nge-ETF, i-firm iceba ukunika abathengi bayo ithuba lokufumana "Eyona BTC" kunokuba i-derivatives efana neekontrakthi zekamva zeBitcoin.
Ngeli xesha, uTyalo-mali lweGreyscale-umphathi we-asethi yedijithali inkulu yehlabathi-ifake ifayile ngexesha elifanayo njenge-Bitwise kwi-SEC ukuguqula i-Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ibe yi-ETF ye-BTC Spot.
Amanqanaba eBitcoin angundoqo oza kujongwa- nge-19 kaDisemba
I-BTC iyaqhubeka nokuhamba ngendlela ye-bearish njengoko irekhoda ukudinwa kwe-bullish kwi-48,000 yeedola eziphezulu ukusuka kwi-rebound izolo ukusuka kwi-45,700 ephantsi. Oku kugatywa kuza ngenxa yoluhlu lweempawu zokumelana nomgca we-48,000 we-$, ngokuqwalasela ukudibanisa kwamanqanaba obugcisa, kubandakanywa umgca we-50 we-SMA, ukwehla kwe-trendline top, kunye nomgca wokuchasana.
I-BTCUSD - Itshathi yeeyure ze-4 kwiGemini. Umthombo: TradingView
Oko kwathiwa, ukusilela ukuphula le nkcaso kwixesha elisondeleyo kunokuqinisekisa omnye umlenze we-BTC, njengoko inkxaso ye-45,000 yeedola ibonwa kwi-cryptocurrency ephambili.
Okwangoku, amanqanaba okumelana nam akwi-48,000 yeedola, i-48,500 yeedola, kunye ne-49,500 yeedola, kwaye amanqanaba am enkxaso angundoqo akwi-$46,300, i-$46,000, kunye ne-$45,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.21 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 893 zezigidi
I-Bitcoin Dominance: 40.3%
Inqanaba lentengiso: #1
tags Bitcoin, BTC, Cryptocurrency, iindaba, Uhlalutyo lobuchwephesha
IiRali zeBitcoin zilandela iSiphumo esiNgcono esivela kutsha nje-equkunjelwe kwi-US Fed Meet
Ukuhlaziywa: 16 Disemba 2021
Bitcoin (BTC) kwaye uninzi lwemalike ye-crypto iphefumle umoya omtsha kade izolo, kulandela impendulo encomekayo kwintlanganiso yase-US Federal Reserve esanda kuqukunjelwa, njengoko iFed ikhethe ukugcina amaxabiso ayo engatshintshwanga.
Umgaqo-nkqubo wokuphela konyaka ugxile ekukhuthazeni imisebenzi kunye nokufumana uzinzo lwamaxabiso kwixesha eliphakathi. I-PR esemthethweni ye-Fed icaphule ukuguquka kwezoqoqosho, okukhuthaze ithemba kubabukeli kuzo zonke iimarike zemali. I-PR yaqaphela ukuba:
"Ngenkqubela phambili yogonyo kunye nenkxaso eqinile yomgaqo-nkqubo, izibonakaliso zemisebenzi yezoqoqosho kunye nengqesho ziye zaqhubeka ziqinisa ... Iimeko zemali zibonke zihlala zihlala, ngokuyinxalenye ebonisa amanyathelo omgaqo-nkqubo wokuxhasa uqoqosho kunye nokuhamba kwetyala kwimizi yase-US kunye namashishini."
I-US Fed ikwadize izicwangciso zayo zokujongana nokunyuka kwamaxabiso, ukuphelisa inkqubo yokuthenga iibhondi, nokukhuthaza ukudalwa kwemisebenzi.
I-Bitcoin yasabela kakuhle kuphuhliso kwaye yahlanganiswa ngaphezu kwe-6% ukusuka kwi-46,540 yemihla ngemihla ephantsi ye-$ 49,500 kwiiyure ezimbalwa. Oko kwathiwa, intlanganiso yeFed idlale indima ebalulekileyo kwi-BTC entsha yomlenze.
Nangona kunjalo, iimarike azikaphumi ehlathini kwaye zigcina i-bestiges ethile. Uloyiko lweBitcoin kunye neSalathiso sokubawa sibonisa ukuba i-benchmark cryptocurrency ikuyo “Uloyiko olukhulu” indawo, njengoko abarhwebi bahlala bethandabuza malunga nokubeka ixesha elide elinobudlova.
Amanqanaba eBitcoin angundoqo oza kujongwa- nge-16 kaDisemba
Njengoko bekuqikelelwe kuhlalutyo lwam lokugqibela, i-BTC iphinde yafumana i-bullish traction, eyatyhalela kwi-49,500 yeedola phezulu namhlanje. Ngokuhambelana nohlalutyo lokugqibela, i-benchmark cryptocurrency irekhode ukucotha okujikeleze loo ndawo, ngenxa yokuba ihambelana nokuhla kwam.
Oko kuthethiweyo, i-cryptocurrency ngoku ijongene nenqanaba elibalulekileyo kwaye kufuneka isabele ngokungalunganga kungekudala. Njengoko kubonisiwe, ukugatywa kwi-trendline, eyona ndlela inokwenzeka yokwenza, kunokuvula iingcango ukuya kwi-45,000 yeedola kunye nezantsi kwi-Bitcoin. Nangona kunjalo, ikhandlela le-bullish elivaliweyo ngaphezu kwe-trendline kufuneka yandise inkxaso eyongezelelweyo kwiibhere kwaye ibeke ixabiso kwinqanaba le-$ 54,000 pivot zone.
Okwangoku, amanqanaba okumelana nam akwi-49,500 yeedola, i-50,000 yeedola, kunye ne-50,500 yeedola, kwaye amanqanaba am enkxaso angundoqo akwi-$48,000, i-$47,000, kunye ne-$46,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.26 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 917.5 zezigidi
I-Bitcoin Dominance: 40.6%
tags Bitcoin, BTC, Cryptocurrency, iindaba, Uhlalutyo lobuGcisa
I-Bitcoin ibetha i-Milestone njenge-90% yazo zonke i-BTC zichithwa
Ukuhlaziywa: 14 Disemba 2021
Emva kweminyaka eyi-13 ukususela ekuqalweni kwayo, i- Bitcoin (BTC) uthungelwano luwele inqanaba elibalulekileyo njengoko i-90% yazo zonke iiBitcoins, ezihlala zikhona, ziye zembiwa. Oko kwathiwa, ukubonelela nge-10% ebalaseleyo kuya kuthatha ixesha elide kakhulu-ngaphezu kweminyaka eyi-100, ngoqikelelo.
I-Bitcoin yaqala uhambo lwayo nge-3 kaJanuwari ka-2009, emva kokusungulwa kwayo ngu-Satoshi Nakamoto, umqambi (abaphuhlisi). USatoshi wemba ibhloko yokuqala yekhonkco, eyaziwa ngokuba yiGenesis Block, ngomhla wokuqaliswa.
Enye yeempawu zeBitcoin ezibaluleke kakhulu kukunqongophala kwayo kwedijithali okuvela kunikezelo lwayo olugciniweyo lwezigidi ezingama-21 zamathokheni. Ngokutsho kwengxelo evela kwi-BlockchainCom, malunga ne-18.89 yezigidi ze-BTC ziye zachithwa, okuyi-90% yonikezelo olupheleleyo, kunye ne-2 yezigidi zemali ezingenayo imali. Nangona kunjalo, ngenxa yezinye iimpawu zenethiwekhi, njengeziganeko eziqhelekileyo zokunciphisa isiqingatha, ubunzima bokuzilungisa, kunye nezinye iipropathi ezicwangcisiweyo, i-21-millionth BTC iya kwenziwa iminyaka eyi-118 ukususela ngoku-2140.
Esona sizathu sokwandiswa kwexesha lokumbiwa kwemigodi luphawu lokunciphisa isiqingatha. Esi siganeko sicwangciswe kwangaphambili senzeka rhoqo kwiibhloko ezingama-210,000 (rhoqo kwiminyaka emine) kwaye sinciphisa umvuzo webhloko ngesiqingatha. Okwangoku, umvuzo wemigodi kwi-6.25 BTC, ngelixa i-2024, iya kunqunyulwa kwi-3.125 BTC. Ngokomxholo, eli nani lalikwi-50 BTC kwi-2009.
Amanqanaba eBitcoin angundoqo oza kujongwa- nge-14 kaDisemba
I-Bitcoin iyaqhubeka nokubonisa ukuthambekela kwe-bearish njengoko irekhoda enye i-cascade yokuthengisa izolo, ilandela ukuphinda kuhlolwe indawo ye-50,000 yeedola. Eyona nto iphambili ye-cryptocurrency igcine indlela ehlayo kwiiveki ezininzi ngoku njengoko sisiya ekupheleni konyaka.
Kuyathakazelisa ukuba i-bearish descents kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ibonakala igcina iphethini. Oko kwathiwa, ipateni efanayo ibonakala isenziwa okwangoku njengoko i-BTC iphinda ivele ngaphezulu kwe-47,000 yeedola. Ndilindele ukuba i-benchmark cryptocurrency ihlangane kwindawo ye-49,000 yeedola kungekudala, apho ipateni evelayo kufuneka ivuthwe.
Ukuba i-BTC iyavumelana nale pateni, sinokubona ixabiso libetha i-$ 45,000 - i-$ 44,000 kwixesha elisondeleyo.
Okwangoku, amanqanaba okumelana nam akwi-48,500 yeedola, i-49,500 yeedola, kunye ne-50,000 yeedola, kwaye amanqanaba am enkxaso angundoqo akwi-$46,300, i-$46,000, kunye ne-$45,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.15 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 889 zezigidi
I-Bitcoin Dominance: 41.3%
"I-Bitcoin inokunyuka ngonaphakade": I-CEO ye-Microstrategy
Ukuhlaziywa: 23 Disemba 2021
Bitcoin (BTC) isendleleni yokurekhoda iveki yayo yokuqala elandelelanayo ye-bearish njengoko irhweba phantsi ngaphezulu kwe-28% ukusuka kwixesha layo langaphambili eliphezulu. Nangona kunjalo, iinkunzi ze-BTC zihlala zinethemba kwixesha eliphakathi kunye nexesha elide le-asethi yedijithali.
Enye yeenkunzi zeenkomo ezinethemba yi-CEO ye-Microstrategy uMichael Saylor, osandul 'ukutyhila ukuba inkampani yakhe ibambe i-BTC kwi-balance sheet ukususela kunyaka odlulileyo. U-Saylor wongeze ukuba akaboni naziphi na izithintelo zexesha elide kwi-benchmark cryptocurrency, ephawula ukuba: "Umngcipheko osemthethweni kuphela yi-swan emnyama - into engaziwayo," ku dliwano ndlebe.
Umphathi weMicrostrategy waxoxa wathi:
Ngaba igqekeziwe? Hayi, akukhange kugqekezwe. Ngaba iza kuvalwa? Hayi, ayizukuvalwa. Ngaba inokukhutshelwa? Sayikhuphela izihlandlo eziliwaka lamawaka. Yonke ikopi ayiphumelelanga.”
U-Saylor uphinde wathi i-Bitcoin inakho “nyuka ngonaphakade” kudliwanondlebe neYahoo Finance Live. I-CEO ye-billionaire yaqaphela ukuba abaqhubi ababini abaphambili bokugwetyelwa kwakhe kukwamkelwa kweteknoloji kunye nokunyuka kwamaxabiso. Wachaza ukuba:
“Iza kuqhutywa yitekhnoloji, njengoko yakhelwa kuFacebook nakuGoogle nakwiApple, yakhelwe kwisikwere kunye nePayPal. Kwaye njengoko usakha kwizinto zobugcisa, oko kuya kuqhuba ukwamkelwa ngakumbi. ”
Nangona kunjalo, u-Saylor uye wavuma i-spike yamva nje yokuguquguquka, ephawula ukuba: "Ayizukunyuka ngokufanayo kwigophe eligqibeleleyo, elibonakalayo, kodwa andicingi ukuba siza kubona umhlaba apho itekhnoloji icotha, kwaye andicingi ukuba siza kulibona ilizwe apho iimali zingenawo. ndingaqhubeki nokunyuka umoya.”
Amanqanaba eBitcoin angundoqo oza kujongwa- nge-12 kaDisemba
Njengoko kuchazwe kuhlalutyo lwangaphambili, i-BTC iye yalungisa kwinqanaba le-$ 47,000 emva kokuhla okubukhali kwi-$ 42,000 ephantsi. Oko kwatsho, ibhenchmark cryptocurrency irekhode i-rebound enempilo kwisithintelo se-$ 50,000 kwiiyure ezidlulileyo ze-24, ngenxa yenkxaso efunyenwe kumgca we-200 we-SMA yemihla ngemihla.
I-BTCUSD -Itshathi yemihla ngemihla kwiGemini. Umthombo: TradingView
I-Bitcoin ngoku ijongene nomsebenzi wokwaphula ngaphezulu kwe-51,400 ebalulekileyo ye-XNUMX njengoko i-bullish inyuka. Nokuba kunjalo, sinokubona ukwehla ukuya kwicala elisecaleni kwiiyure ezizayo njengoko umthamo worhwebo uhlala uncinci.
Okwangoku, amanqanaba okumelana nam akwi-50,000 yeedola, i-50,500 yeedola, kunye ne-51,400 yeedola, kwaye amanqanaba am enkxaso angundoqo akwi-$48,500, i-$47,000, kunye ne-$46,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.27 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 938.7 zezigidi
I-Bitcoin Dominance: 41.2%
Ixabiso le-Bitcoin Hash lisondele kwixesha elidlulileyo kwixesha eliphakamileyo njenge-China ilahlekelwa yimpembelelo yeMarike ye-Crypto
Ukuhlaziywa: 9 Disemba 2021
Ngaphandle kweemvakalelo ezingapheliyo, Bitcoin (BTC) irekhode ukubuyisela kwakhona okubalulekileyo kwiimethrikhi zayo zenethiwekhi. Ngokwengxelo yakutshanje evela kumnikezeli we-on-chain analytics Galssnode, izinga le-Bitcoin le-hash liye laphindaphindeka kakhulu kwaye li-4% kuphela kude nokuphakama kwayo kwangaphambili.
Izinga le-benchmark cryptocurrency ye-hash yehle ngaphezulu kwe-50%, kulandela ukuvalwa kwe-Bitcoin yakutsha nje. Ukusukela ngoko, imakethi irekhode ukonyuka kozinzo njengoko izinga layo le-hash linyuke ngaphezulu kwe-90%. Ngokwengxelo, iGlassnode yaphawula ukuba:
"I-Bitcoin hashrate iphantse yachacha ngokupheleleyo, ihleli kuphela i-4% ngaphantsi kwe-ATH (i-7-day move average basis). I-hashrate yenethiwekhi yehle ngaphezulu kwe-50% ngoMeyi kulandela ukuvalwa kweTshayina kwimigodi yeBitcoin. IHashrate inyuke nge-93% ukusuka ezantsi, ibetha i-172 Exhahash/s namhlanje.
Ukubuyiswa kwezinga le-Bitcoin ye-hash kuzisa iindaba ezilungileyo kuthungelwano, ngakumbi malunga nokhuseleko lwenethiwekhi. Ngokuqhelekileyo, izinga eliphezulu le-hash libonisa ukuba inethiwekhi inamandla okusebenza aphezulu, okomeleza ukhuseleko lwenethiwekhi.
Uphuhliso lwamva nje lwekhonkco luqinisekisa ukuba ulawulo lwaseTshayina kwintengiso yeBitcoin luhlile kakhulu kwezi nyanga zidlulileyo. Ngaphambili ngoku, i-China ibambe impembelelo enkulu kwimisebenzi yexabiso le-crypto asset. Ukuqhubela phambili, iindaba ezinxunguphalisayo ezinxulumene ne-crypto ezivela kwi-giant yase-Asia ziya kuba nefuthe elincinci kwi-cryptocurrency yokuqala.
Amanqanaba eBitcoin angundoqo oza kujongwa- nge-9 kaDisemba
I-BTC yahlala ngaphakathi kwemida ye-50,500 yeedola ukuya kwi-49,000 yeedola ngoLwesine, njengoko imarike ebanzi yamkele umkhethe ongekho mkhombandlela ukusukela kwingozi yeflash. Oko kwathiwa, i-benchmark cryptocurrency ibethe i-$ 51,800 ephezulu ngoLwesibini kodwa ayiphumelelanga ukugcina amandla kwaye yawela kwinkxaso ye-49,000 yeedola.
Okwangoku, amadabi e-cryptocurrency aphambili ukugcina unyawo olungaphezulu kwenqanaba le-49,500 yeedola ngaphambi kwentlanganiso yenkongolo ecwangciselwe kamva namhlanje. Ukubamba ngempumelelo ngaphezu kweli nqanaba ukuya esiphelweni sosuku kunokutshisa elinye i-arish wave ukuya kwinqanaba eliphezulu leveki kwi-51,800 yeedola kwaye mhlawumbi ngaphezulu.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.33 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 930 zezigidi
I-Bitcoin Dominance: 39.9%
I-Bitcoin ibuyisela i-51,000 yeedola njengabatyali-mali bahlala besoyika kakhulu
Ukuhlaziywa: 7 Disemba 2021
Bitcoin (BTC) ifumene ingozi enkulu yosuku olunye okokuqala ukusukela phakathi kuMeyi ngoMgqibelo ophelileyo, njengoko ixabiso lehla laya kutsho kwiiveki ezininzi ezisezantsi ezingama-42,000 zeedola. Njengoko kulindelekile, i + $ 16,000 crash ngaphakathi kweeyure ze-24 yathumela abatyali-mali abaninzi kwi-panic, eyathumela i-Bitcoin Fear and Greed Index. “Uloyiko Olugqithisileyo” imimandla.
I-Index ye-Fear and Greed Index isebenza njengesalathisi somtyalo-mali okhoyo nangaliphi na ixesha kwi-asethi ye-crypto. Ifumana ufundo lwayo ngokuhlanganisa iimetriki ezininzi ezikwi-chain, kubandakanya ukuguquguquka kwe-asethi, umthamo, intsingiselo yemidiya yoluntu, uphando, kunye nokunye okuninzi. Ufundo lwe-Index luqala ku-0 (Uloyiko Olugqithisileyo) – 100 (Ukubawa Okugqithisileyo).
Ngexesha lokushicilela, i-Bitcoin Fear and Greed Index ibonisa ukuba abatyali-mali bakwi-panic ephawulekayo njengoko ukufundwa kubonisa i-25 (I-Extreme Fear).
Esona sizathu siphambili emva kwengozi yakutsha nje kukufunyanwa kwento entsha ye-COVID-19 eyahlukileyo, i-Omicron, ethumele yonke imarike yezemali kwiphambuko elothusayo.
Okwangoku, umboneleli we-analytics CryptoQuant ubonise ukuba uphuhliso lwe-chain-chain olukhokelela kwingozi lubonise ukuphazamiseka okunokwenzeka. Iqonga libonise ukuba inani le-BTC kwi-crypto exchange spiked kakhulu kwiiyure ezimbalwa ngaphambi kokuwa.
Oko kuthethiweyo, abatyali-zimali abakrelekrele bayazi ukuba elona xesha lilungileyo lokufumana imarike kuxa “kukho igazi ezitratweni.” Kuqhelekile ukuthenga xa iimarike zemali zikwindawo "yoloyiko olugqithisileyo" kwaye ngokuchaseneyo.
Amanqanaba eBitcoin angundoqo oza kujongwa- nge-7 kaDisemba
I-BTC iphinde yafumana i-bullish traction ngoMvulo emva kwexesha kwaye ityale unyawo olusempilweni ngaphezu kwe-51,000 yeedola. Nangona kunjalo, i-benchmark cryptocurrency ayiphumelelanga ukuphula ngaphezu kwe-51,400 ye-barrier kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo kwaye ihlupheke ukukhatywa kabini kulo mgca.
Le ntshukumo ye-bullish iza njengoko imarike ebanzi iphinda ibuyele phezulu, nto leyo ebonisa ukuba sinokubona ukuqhubeka kwe-bullish ukuya kuma-53,000 eedola zokuxhathisa kwiiyure ezizayo. Oko kwathiwa, i-BTC idinga ukubamba ngaphezu kwe-$ 50,000 uphawu lwezengqondo ukugcina olu qikelelo lwe-bullish, njengoko ikhefu elingaphantsi kwelo phawu lingaphazamisa imizamo yeenkunzi zenkomo kwaye ithumele ixabiso kwi-lows yangaphambili.
Okwangoku, amanqanaba okumelana nam akwi-51,400 yeedola, i-53,000 yeedola, kunye ne-54,000 yeedola, kwaye amanqanaba am enkxaso angundoqo akwi-$50,500, i-$50,000, kunye ne-$49,500.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.40 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 968.6 zezigidi
I-Bitcoin Dominance: 40.5%
I-Bitcoin Falls ukuya kwi-28,800 yeedola kwi-Huobi Phakathi kwe-Flash Crash ye-Marketwide ephazamisayo
Ukuhlaziywa: 5 Disemba 2021
Ukulandela ingozi yemarike kwishishini le-crypto izolo, Bitcoin (BTC) ihlupheke i-21% iphose ukuya kwi-42,000 yeedola ephantsi kutshintshiselwano oluninzi. Ukuwohloka kwayizolo ngokungathandabuzekiyo yenye yezona zinto zimbi kwimbali yamva nje yentengiso, kunye ne-BTC echitha ngaphezulu kwe-11,500 yeedola kuphela.
Nangona kunjalo, abarhwebi be-Huobi bafumene ingozi embi kakhulu njengoko i-crypto asset irekhoda idiphu ebukhali ukuya kwinqanaba le-28,800 yeedola ngaphambi kokutsibela kumanqanaba aqhelekileyo.
Esi siganeko saziwa ngokuba yi-a "iflash crash" kwaye ibonakaliswe ngokuhla kwexabiso le-asethi enye okanye ngaphezulu kutshintshiselwano xa kuthelekiswa noninzi lwemarike kwaye ifumana kwakhona ngokukhawuleza. Ukuphahlazeka kwayizolo ukuya kwi-$ 42,000 kunye nokubuyela kwindawo ye-$ 46,000 yenzeke kwimizuzu embalwa kwaye yayinezinye iimpawu ze-flash crash.
Njengoko bekulindelekile, i-nosedive yayizolo, ebangele ukuhla okukhulu kwedijithi ephindwe kabini, kubangele ukuthengiswa okukhulu kwabarhwebi abanamandla. Aba barhwebi kusenokwenzeka ukuba baye balahlekelwa kakhulu.
Ngokutsho kweqonga le-analytics CoinGlass (Bybt), ukuthengiswa okupheleleyo kuwele i-2.5 yeebhiliyoni zeedola izolo kuphela. Ingxelo ibonisa ukuba abarhwebi abamalunga nama-400,000 babhangisiwe, kwaye eyona ndawo iphezulu yokupheliswa yayiyi-28 yezigidi zeedola kwi-Bitfinex.
Ngeli xesha, uninzi lwezinye i-cryptocurrencies (altcoins) ziye zaba mbi kakhulu, ezinye ziphalala kangange-30%.
Amanqanaba eBitcoin angundoqo oza kujongwa- nge-5 kaDisemba
Ukulandela ukuwohloka kwayo ukuya kwi-42,000 yeedola ephantsi, i-BTC iye yachacha ngesiqingatha sokuwa izolo ukusuka kwinqanaba le-53,000 yeedola. I-benchmark cryptocurrency okwangoku ijikeleza malunga ne-$ 49,500 uluhlu njengoko abathengisi bethatha inzuzo. Nokuba kunjalo, iimethrikhi ezikwi-chain-chain zisabonisa ukuba uluvo olupheleleyo lwe-bullish luhlala luhleli kwi-BTC.
Nangona kunjalo, ndilindele ukuvavanywa kwakhona kwe-$ 45,000 ephantsi kwiiyure ezizayo okanye iintsuku ngaphambi kokuba ixabiso lihlehliswe ngokuqhubekayo okanye ukuqhubeka kwe-bearish. Ukuze iinkunzi zenkomo ziphinde zilawule kwi-technical front, i-BTC idinga ukuphinda ivuke ngaphezulu kwe-pivot top ye-54,000 yeedola, umgama omkhulu ukusuka kumanqanaba ayo angoku.
Okwangoku, amanqanaba okumelana nam akwi-50,000 yeedola, i-50,500 yeedola, kunye ne-51,400 yeedola, kwaye amanqanaba am enkxaso angundoqo akwi-$48,500, i-$47,000, kunye ne-$46,300.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.32 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 930.7 zezigidi
I-Bitcoin Dominance: 40%
I-Bitcoin ikhubeka ngaphantsi kwe-59,000 yeedola nangona i-Firm On-Chain Metric
Bitcoin (BTC), ecaleni kweemarike zesitokhwe zehlabathi, iyaqhubeka ihlupheka nge-FUD phakathi kokuvela kwe-Omicron COVID-19 eyahlukileyo.
A uluvo umngcipheko-off kwiimalike zemali zehlabathi, ukuqhubeka iinzame bond tapering yi Federal Reserve, kunye nomlinganiselo ophezulu kwi BTC derivatives zonke kufutshane-ixesha ukuguquguquka-indung imiba yesenzo ixabiso Bitcoin kaThixo.
Ngaphandle kwazo zonke ezi, i-on-chain metrics ye-BTC ihlala i-bullish, enokubonelela abatyali-mali ngamathuba amaninzi okuthenga kwimeko yokwanda kokuthengiswa okanye ukuguquguquka kwemarike yemasheya. Ukuma kwe-bullish kuhlala ixesha elide njenge-HODLers kunye nabasebenzi basezimayini ngokungalahli izinto zabo zokubamba kunye ne-pullback.
Abasebenzi be-HODL kunye nabasebenzi-mgodini baya belahla izinto abazibambileyo yinkxalabo ebalulekileyo kwiimarike, ngakumbi iinkunzi zenkomo. Nangona kunjalo, ukuhla kwexabiso lamva nje, okuhambelana nokuwa koovimba botshintshiselwano ukuya kwiminyaka emininzi ephantsi, kwenza ukuba kungafane kwenzeke ukuba i-FUD ekhoyo iqalise imakethi yeBhere.
Oovimba botshintshiselwano babhekisa kwinani leengqekembe ezikhutshelwayo zisuka kwizipaji zabucala ukuya kutshintshiselwano kwaye zithathwa njengophawu lwe-bearish. Kwelinye icala, ukwehla koovimba botshintshiselwano kubonisa indlela eqinileyo yokuqokelela kwaye iqhelekile luphawu lwe-bullish.
Ukususela ngoNovemba 1, yonke i-Bitcoin ekutshintshisweni kwe-crypto iye yehla ngaphezu kwe-62,500 ye-BTC, ibeka indawo yokugcina imali kwirekhodi yeminyaka emininzi ephantsi kwe-2.3 yezigidi ze-BTC. Oku kuthetha ukuba malunga ne-89% yazo zonke i-BTC ejikelezayo ayifumaneki ukuthengiswa.
Amanqanaba eBitcoin angundoqo oza kujongwa- nge-2 kaDisemba
Ukulandela ukuhamba kancinci izolo, i-BTC ichukumise i-59,000 yeedola ukuxhathisa kodwa ayiphumelelanga ukuphuka ngaphaya kwalo mgca ubalulekileyo okwesihlandlo sesithathu kwiintsuku ezintathu, ebonisa ukuba le nto iye yaba yinqanaba elibalulekileyo leenkunzi zokucima ukubuyisela i-bullish motion.
I-BTCUSD - Itshathi yeyure ezi-4 kwiGemini. Umthombo: TradingView
Eyona nto ephambili cryptocurrency Ngokufutshane iwe phantsi kwesiseko se-pivot ye-$56,000 izolo kodwa irekhode ukuphinda kuphindwe ukuya kumanqaku angama-57,000 e-$, kanye phantsi komzila wam ohlayo. Umdla wokurhweba umthamo ubonakala unyukile kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo, nto leyo ebonisa ukuba ukuqhambuka kwe-bullish kusenokungabi kude. Umsebenzi wexabiso wexesha elisondeleyo, njengoko sisiya kwimpelaveki, kufuneka simisele ukuba iBTC iya ngaphi na phakathi kweengcamango zeFUD.
Okwangoku, amanqanaba okumelana nam akwi-57,500 yeedola, i-58,000 yeedola, kunye ne-59,000 yeedola, kwaye amanqanaba am enkxaso angundoqo akwi-$56,700, i-$56,000, kunye ne-$55,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.60 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 1.06 zezigidi
I-Bitcoin Dominance: 41%
tags Bitcoin, BTC, Cryptocurrency, Uhlalutyo lobuGcisa
I-MicroStrategy ilayisha phezulu kwi-BTC njenge-Bitcoin Reels ukusuka kwi-Crash yangaphambili
Ukuhlaziywa: 30 Novemba 2021
As Bitcoin (BTC) iyaqhubeka igxadazela malunga ne-60,000 yeedola, i-MicroStrategy ine-7,002 BTC kwi-stash yayo, izisa ukugcinwa kwayo kwi-121,044 zemali. I-CEO ye-MicroStrategy uMichael Saylor waphule iindaba izolo, ebhala ukuba:
“I-Microstrategy ithenge i-7,002 ye-bitcoins eyongezelelweyo nge-~ $ 414.4 yezigidi zemali ngemali ngexabiso eliphakathi ~ $ 59,187 nge-bitcoin nganye. Ukusukela nge-11/29/21, siye safumana ii-bitcoins eziyi-121,044 nge-~$3.57 yeebhiliyoni ngexabiso eliphakathi kwe-~$29,534 nge-bitcoin nganye.”
Ngexabiso langoku le-BTC ye-57,000 yeedola, i-MicroStrategy's Bitcoin ibambe ngoku imile kwi-6.9 yeebhiliyoni zeedola.
Okwangoku, u-Saylor usandul 'ukuthetha malunga nokuba kungenzeka ukuba i-BTC ibe yiklasi ye-asethi ye-100 yeebhiliyoni kudliwano-ndlebe. Wongeze ukuba i-benchmark cryptocurrency irekhode impumelelo ezinzileyo ngokuchasene negolide, ephawula oko "Igolide yedijithali iza kuthatha indawo yegolide kule minyaka ilishumi."
Ukongeza, umphathi we-MicroStrategy waphawula ukuba akalahlekelwa bubuthongo malunga neentetho eziqhubekayo zomgaqo kwishishini le-cryptocurrency eWashington. USaylor waqinisekisa ukuba inokuchaphazela amathokheni okhuseleko, utshintshiselwano lwezemali (DeFi), utshintshiselwano lwe-cryptocurrency, kunye nezinye iimveliso ze-crypto kodwa hayi iBitcoin, ephawula ukuba. "I-Bitcoin ayinakumiswa njengepropathi yedijithali."
NgoLwesihlanu ophelileyo, u-Saylor ubhale kwi-tweet ukuba: "I-Bitcoin inika ukhuseleko olungcono lokunyuka kwamaxabiso kunegolide kwaye ikhula ngokukhawuleza kune-tech enkulu." I-CEO ye-billionaire ikholelwa ukuba i-BTC "Kukuphela kwepropathi onokuthi ube nayo ngokwenene, kunye netekhnoloji yokuqala ekwaziyo ukunika wonke umntu osemhlabeni amalungelo epropathi."
Amanqanaba eBitcoin abalulekileyo omawubukele - nge-30 kaNovemba
Njengoko ndiqikelele kuhlalutyo lwangaphambili, i-BTC irekhode i-spike ukuya phezulu- $ 58,000 izolo kodwa idibene ne-snag engaphantsi kwe-$ 59,000 yokuchasana, eyathumela ixabiso kwi-pivot ye-$ 56,000.
Oko kuthethiweyo, i-benchmark cryptocurrency ithumele i-rebound ehloniphekileyo kwindawo ye-57,000 yeedola njengoko imarike ebanzi igungqisa imvakalelo yangaphambili ye-bearish. Ikhefu elingaphezu kwe-57,500 (ukuhla kwe-trendline) kwiiyure ezizayo kufuneka zikhusele isiseko se-bullish ye-cryptocurrency ye-flagship njengoko sisiya kwinyanga yokugqibela yonyaka.
Njenge-caveat, nayiphi na i-bearish push kufuneka igxothwe yi-$ 56,000 - i-$ 53,755 indawo ye-pivot.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.63 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 1.08 zezigidi
I-Bitcoin Dominance: 41.4%
I-El Salvador iThenga i-Bitcoin Dip phakathi kwe-FUD-Induced Sell-Off
Ukuhlaziywa: 28 Novemba 2021
Njengoko imakethi ye-crypto iqhubeka nokuba ngumqolomba phantsi koxinzelelo olukhoyo lwe-FUD, i-El Salvador ithengile Bitcoin (BTC) dipha kwakhona.
Isizwe esikuMbindi waseMelika sathatha ithuba lokuthengisa okuphezulu ukuthenga ii-BTC ezili-100 ngaphezulu phakathi koloyiko ngenxa yento entsha. "Omicron" intsholongwane ye-COVID-19. Umongameli wase-El Salvador Nayib Bukele uye kuTwitter ngolwe-Sihlanu ebhengeza ukuba ilizwe liyithengile idiphu, ephawula ukuba: "I-100 yeengqekembe ezongezelelweyo ezifunyenwe ngesaphulelo."
NgoLwesihlanu odlulileyo, uMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) wachaza ukwahluka kwe-Omicron njengento ebulalayo kwaye inokudluliselwa ngakumbi kunezinye izinto ezahlukeneyo. Amagqabantshintshi e-hawkish abangela ukuthengiswa okukhulu kwe-BTC, eyawa kwi-$ 59,195 ngoLwesine ukuya kwi-$ 53,530 emini ngoLwesihlanu. Ngexesha lokushicilela, i-BTC ithengisa kwi-54,300 yeedola njengoko uxinzelelo lokuthengisa lukhona.
El Salvador wenza ngokusemthethweni Bitcoin ithenda esemthethweni ecaleni dollar US ngoSeptemba 7. Ngelo xesha, cryptocurrency benchmark kurhweba ngeenxa $46,000. Ukususela ngoko, isizwe saseCentral America senze ukuthenga kwe-BTC okulandelelanayo, okuzise ukubamba kwayo yonke i-1,220 BTC.
Ngeli xesha, uBukele ubhengeze izicwangciso zokwenza eyokuqala yehlabathi "I-Bitcoin City," ixhaswa yi-volcano kwaye ixhaswa ngemali yi-BTC bonds, eyokuqala yohlobo lwayo.
Amanqanaba eBitcoin abalulekileyo omawubukele - nge-28 kaNovemba
Ukulandela ukuwa kwayo okubangelwa yi-FUD, i-BTC ifumene inkxaso kwi-pivot ye-54,000 yeedola, njengoko imarike ibone ukuhla kwe-bearish ngeCawa. Oko kwathiwa, ikhondo elilandelayo lesenzo se-benchmark cryptocurrency lihlala ligutyungelwe kukungaqiniseki.
Nangona kunjalo, ukuba i-BTC iyaqhubeka nokuthintela isilayidi esingaphantsi kwe-54,000 yeedola kwiiyure ezizayo, sinokubona ukunyuka kwe-bullish traction ukuya kwi-57,000 - $ 58,000 kungekudala.
Okwangoku, amanqanaba okumelana nam akwi-55,000 yeedola, i-55,500 yeedola, kunye ne-56,700 yeedola, kwaye amanqanaba am enkxaso angundoqo akwi-$54,000, i-$53,000, kunye ne-$52,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.45 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 1.02 zezigidi
I-Bitcoin Dominance: 42%
tags Bitcoin, BTC, Cryptocurrency, El Salvado , iindaba, Uhlalutyo lobuchwephesha
← Entsha izithuba 1 2 3 ... 28 abaDala izithuba →